China Vapor Recovery Valve mveliso kunye nabenzi | Jiasheng
1.Aluminium ingxubevange die-cast isakhiwo, unyango anodised.
2. Uxinzelelo olukhulu lwasentwasahlobo, itywina elikhawulezayo nelomeleleyo.
3. Ukuhamba okuphezulu okuphezulu, ukwehla koxinzelelo olusezantsi.
5. Ifumaneka ngayo yonke i-TTMA flange.
6. Usebenzisa umlawuli womoya ukulawula ukuvulwa nokuvalwa.
8. I-1/4 ye-NPT imigca yomoya.
9. Udibana nomgangatho we-EN13083, i-flange idibana nomgangatho we-TTMA.
Best umthengisi aluminium ingxubevange ipetroli / amafutha tanker vapor recovery vent valve for tank truck truck tanker
Ukufakela kwi-Manhole Cover okanye ngaphezulu kweTanki. Icala lokuphuma lidityaniswe nethumbu leerabha kumbhobho wokubuyisela umphunga. Xa itanki ithutha okanye isothula umthwalo ngomphunga ungena ngaphakathi okanye ngaphandle itanki, eli licandelo elibaluleke kakhulu kwinkqubo yokubuyisela umphunga.
Igama lemveliso itanki yamafutha ivalv yokuchacha kwakhona
ubungakanani 3 ”
Uluhlu lobushushu -20 ℃ - + 70 ℃
Isikhokelo sokusetyenziswa kunye nezibonelelo ze i-aluminium ingxubevange yombane yokubuyisa umphunga yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
Ukufakela kwi-Manhole Cover okanye ngaphezulu kweTanki. Icala lokuphuma lidityaniswe nethumbu leerabha kumbhobho wokubuyisela umphunga.
* Unyango oluQinisekileyo
Umzimba wonke wevalufa udlulise inkqubo ekhethekileyo yokuqinisa ukuphucula ubomi bayo benkonzo.
* Ukusebenza ngokulula
Ulandelelwano lolawulo lokulawula ivalve yangoku evulekileyo yokulawula uthotho lwevalvu elandelayo evulekileyo.
* Umgangatho ophezulu
Indawo ye-shaft yangaphakathi engenazintsimbi iqinisekisa ukumelana kwayo nomhlwa.
* Ubunzima bokuKhanya
* Umzimba ophambili wenziwe ngealuminium alloy, ukhanya ngakumbi kwaye womelele.
* UkuTywina okungqongqo
* Ukuqinisekisa ngokufanelekileyo ukuba itanki ayiphuphumi emva kokuqengqeleka.
Igama lomxholo Ivalufa yokubuyisa umphunga Inombolo yomzekelo YJ7509
Izinto eziphambili IAluminiyam Ubukhulu: 4 ″
Indlela yokusebenza Womoya Uxinzelelo lokusebenza 0.6MPa
Imowudi yoxhumano Umsonto Uluhlu lobushushu -20 ~ + 70 ℃
Phakathi Idizili, ipetroli, iparafini Umgangatho I-API1004 kunye ne-EN13083
ivalve yokubuyisa umphunga ifakiwe kwisembozo somngxunya okanye ngaphezulu kwetanki ukunqanda ukuvuza kweoyile kunye negesi kwinkqubo yokulayisha kunye nokothula ukusetyenziswa kwakhona kwangaphakathi.
Xa ilori yetanki ilayisha kunye nokothula umthwalo, isebenzisa isilawuli somoya ukuvula ivalpet yepoppet ukugcina ukuhamba ngokukhawuleza kweoyile kunye nerhasi, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, ukutywina okusebenzayo kunye nokulingana koxinzelelo lwetanki.
Umba Ivalufa yokubuyisa umphunga
Umzekelo No. YJ7508
UMzimba weMeterial Ingxubevange yeAluminiyam
Indlela yokuSebenza Womoya
Uxinzelelo lokusebenza 0.6MPa
Phakathi Ipetroli, iparafini, idizili
Uluhlu lwamaqondo obushushu -20 ~ + 70 ℃
Umgangatho EN13083 umgangatho, esisangqa idibana TTMA standard.
Ubungakanani 4 ″
Egqithileyo I-Valve yeAdapter yeAdv API
Okulandelayo: Isixhobo sokuBuyisa iVapor
Iphepha le-Fuel Tank Cover
Ukucaciswa kobuchwephesha Igama leMveliso Iapi yeadaptha yevalufa itafile yothuli ikepusi Ububanzi obuqhelekileyo Ubunzima be4inch Uxinzelelo oluqhelekileyo 0.6Mpa Imowudi evulekileyo yemathiriyeli yealuminium alloy Medium idizili / ipetroli Ubushushu bokuSebenza- + 70 ℃ -40 ℃ API iadaptha yevali ityhubhu ipetroli yothuli ikhusela itanki ezantsi ukothula ivelufa nokungqubana ikhululekile, ikhava yokuhamba ikulungele, unxibelelwano oluthembekileyo, indawo ebambekayo yesitywina se-gasket yerabha, inokuthintela ngokufanelekileyo ubungozi kuxinzelelo lwe-cam ye-anodised ...
Impompo yombhobho yombane
Impompo yombhobho yombane isebenza ngokudlulisa okucocekileyo, okuphantsi kokubola, ulwelo lwe-viscosity ephantsi kwimiphanda okanye kwiitanki ezifanayo. ngezinto ezahlukeneyo, iimoto ezahlukileyo, inokumpompa ioyile yedizili, ipetroli, iparafini, ioyile yeinjini, ioyile hydraulic, ioyile yemifuno, ubisi, isiselo kunye neekhemikhali. i-petroli, i-methanol, utywala, i-oyile ye-injini i-220v ibinzana elinye lokuqhuma ubungqina be-viton seal isatifikethi sobungqina bokuqhuma kwesizwe kwi-oyile yokupheka, i-oyile yezityalo, i-chemical liquid, i-oyile eshushu.
I-Fuel Dispenser Breakeway Valve
I-5-Wire Overfill Optic Probe kunye neSocket
isivamvo optic isivamvo efakwe encotsheni inshorensi itanki oyile mgodi. Sisixhobo sokukhusela esiphuphumayo. Xa ioyile ivunyelwe ukuba igcwalise itanki yeoyile, ijongana nolawulo lwenqanaba leoyile. Xa ioyile inyuka iye kwicordon, inzwa iya kwenza isilumkiso ukuthintela ukugcwala kweoyile okanye ukubaleka. Yeyona systtem ilungileyo yokunxibelelana. Umzimba wayo unentambo ezimbini zokufaka. Isisusi se-M20 esimileyo kufuneka sixhotyiswe ngegasket enye kunye nekepusi enye ukwenza umqhubi. Ku ...
Round esisangqa Ball Valve
Uhlobo lohlobo lweFlange Distance Hole Distance Work Pressure Range DN40 (1.5 ″) Aluminium Alloy 85 110 0.6MPA (-20, +70) DN50 (2 ″) 90 125 DN65 (2.5 ″) 115 145 DN80 (3 ″) 130 160 DN100 (4 ″) 155 180 DN100 (4 ″) 275 240